iPhone 7 Plus haizoshandisa iyo telephoto lens mune yakaderera mwenje | IPhone nhau
IPhone 7 Plus haizoshandise telephoto lens ye optical zoom mune yakaderera mwenje
Nezuro, Apple yakakanda hafu nekushamisika beta yekutanga yeIOS 10.1. Pakutanga zvaishamisa kuti yaive beta yeiyo vhezheni x.1, nekuti idzi shanduro dzinowanzo sanganisira zvakakosha maficha, asi zvishoma gare gare takadzidza kuti imwe yezvinhu zvitsva zvichauya pamwe neiyo yemberi vhezheni ndeyekuti inosanganisira iyo software inodikanwa kuitira kuti iyo iPhone 7 Plus Tora mafoto nemhedzisiro yekusanzwisisika kumashure. Kubva pakuonekwa kwayo, software ichaita basa rakakura mukamera mbiri yeiyo iPhone 7 Plus.
Vhiki rino, Phil Schiller, mutevedzeri wemutungamiri weApple wekushambadzira, akapindura paTwitter kumubvunzo wekuti nei iyo iPhone 7 Plus haigari kushandisa telephoto lens. Mhinduro yaSchiller inonzwisisika tichifunga kuti zvirinani zvemaviri maviri kamera lenses pane iyo iPhone 7 Plus ine aperture yakakura kupfuura iyo telephoto lens, iri f / 1.8 maringe f / 2.8 yechipiri lens.
Iyo iPhone 7 Plus haigare ichishandisa ayo maviri malenzi emifananidzo
@IWoood Hapana Nyaya. Muchiedza chakadzika (kana 10cm macro) iyo mbiri kamera inogona kushandisa yakafara kona 28mm f / 1.8 + OIS lens yemufananidzo wakanaka # iPhone7Plus
- Philip Schiller (@pschiller) September 17, 2016
Zviri Woody, hure: @pschiller hesi, Phill. Iyo # iPhone7Plus ine dambudziko neiyo telephoto lens? Ndakaona yakawanda ye7+ ichishandisa zoom yedhijitari pane kushandisa iyo telephoto lens pachayo.
Phil Shiller: @iWoood Hapana dambudziko. Muchiedza chakadzika (kana 10cm macro) iyo mbiri kamera inogona kushandisa yakakura 28mm f / 1.8 + OIS lens kune yakanakisa # iPhone7Plus foto.
Kunyangwe kuwedzera lens rechipiri idanho rakakura kuenda kumberi, zvinoita sezviri pachena kuti zvimwe zvakawanda zvaigona kunge zvakaitwa dai malenzi ese aive akafanana, kana zvimwe zvakafanana. Ndine chokwadi chekuti ichi chichava chimwe chezvinhu zvitsva zvichauya pamwechete ne chegumi iPhone yekuyeuka, kamera ine simba yakawanda mbiri iyo ingangouya ne SDK saka vanogadzira vanogona kugadzira software yeApple's mbiri kamera. Tichaona iyo iPhone inotora 3D mafoto muna 2017?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » IPhone 7 Plus haizoshandise telephoto lens ye optical zoom mune yakaderera mwenje
Apple Inoburitsa iOS 10.1 Veruzhinji Beta
VLC Streamer yemahara kwenguva pfupi